Suman Pandey, Author at Mitho Khabar
Author: Suman Pandey
November 2, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on आज – १७ कार्तिक २०७७ सोमवार को राशिफल आज यी राशिलाई शुभ हुने याेग रहेकाे छ
आज – १७ कार्तिक २०७७ सोमवार को राशिफल आज यी राशिलाई शुभ हुने याेग रहेकाे छ आज – १७ कार्तिक २०७७ सोमवार को राशिफल मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मनपर्ने व्यक्तिको भरपुर साथ र सहयोग मिल्नेछ । ऋण गरेरै बभएनि सामान खरीद गरीनेछ, तर खनपीन र स्वास्थ्यको विशेष ख्याल […]
November 1, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on आज – १६ कार्तिक २०७७ आइतवार को राशिफल आज यी राशिलाई शुभ हुने याेग रहेकाे छ ?
आज – १६ कार्तिक २०७७ आइतवार को राशिफल आज यी राशिलाई शुभ हुने याेग रहेकाे छ ? आज – १६ कार्तिक २०७७ आइतवार को राशिफल मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कार्यबाट सफलता मिल्नेछ । घरमा अतिथीको आगमनपनि हुनेछ । मिथुन […]
October 31, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on आज – १५ कार्तिक २०७७ शनिवार को राशिफल आज यी राशिलाई शुभ हुने याेग रहेकाे छ ?
आज – १५ कार्तिक २०७७ शनिवार को राशिफल मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुची बढ्नेछ । प्रेममा मधुरता छाउनेछ । विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । मिथुन मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) दैनिक […]
October 30, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on यी पत्रकारको च्यालेन्जपछि ‘धन्यवाद’ भनेर हिँडे ट्रम्प
यी पत्रकारको च्यालेन्जपछि ‘धन्यवाद’ भनेर हिँडे ट्रम्प एजेन्सी । जब एक पत्रकारले भेट्रन्स हेल्थ केयरबारे आफ्ना झुठ सही प्रमाणित गर्न ट्रम्पलाई च्यालेन्ज गरिन्, तब उनी एक्कासी शनिबारको पत्रकार सम्मेलन छाडेर हिँडे । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनका अनुसार ट्रम्पले यसबारे १ सय ५० भन्दा धेरैपटक झुठ बोलिसकेका थिए । र, न्युु जर्सीस्थित बेडमिनिस्टर गल्फ क्लबमा उनले फेरि […]
October 30, 2020 October 30, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on खुसिको खबर : एसइइ पास गरेका युवालाई सरकारले ५ लाख दिने !(पुरा जानकारी सहित)
खुसिको खबर : एसइइ पास गरेका युवालाई सरकारले ५ लाख दिने !(पुरा जानकारी सहित) यसअघि सात लाख रुपैयाँसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार र १० लाख रुपैयाँसम्मको विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा सञ्चालनमा छन् । माध्यमिक तह वा सो सरहको शिक्षा हासिल गरेकाले समेत पाँच लाख रुपैयाँसम्मको युवा स्वरोजगार कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । सिप विकास उद्यमशिलता तालिम […]
October 30, 2020 October 30, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on जो कोही महिलाहरु पुरुषले आफ्नो यी ३ अंग हेरोस भन्ने चाहन्छन
जो कोही महिलाहरु पुरुषले आफ्नो यी ३ अंग हेरोस भन्ने चाहन्छन काठमाडौ । प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेरपनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ ।त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन ।विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित […]
October 30, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on पौराणिक कथनः पार्वतीका कारण बन्यो समुद्रको पानी नुनिलो !
पौराणिक कथनः पार्वतीका कारण बन्यो समुद्रको पानी नुनिलो ! शिव पुराणका अनुसार एक पटक देवी पार्वती महादेवलाई पतिका रुपमा पाउन भनि घोर तपस्यामा थिइन् । उनको तपस्याको तेज यतिधेरै थियो कि देवलोकमा बसेका देवताको समेत सिंहासन डगमगाएको थियो । जसका कारण देवता भयभीत भए । यसरी देवलोक सिंहासन डगमगाएपछि सम्पूर्ण देवता यस समस्याको समाधान खोज्न […]
October 30, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on आज १४ कार्तिक २०७७ शुक्रवार को राशिफल आज यी राशिलाई शुभ हुने याेग रहेकाे छ ?
आज १४ कार्तिक २०७७ शुक्रवार को राशिफल आज यी राशिलाई शुभ हुने याेग रहेकाे छ ? आज – १४ कार्तिक २०७७ शुक्रवार को राशिफल मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज कामहरु अधुरै रहन सक्छन् । आफ्नो विचार विपरित निर्णय हुनेछ । अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च होला । वैदेशिक क्षेत्र […]
प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरू कुन देशका नागरिक हुन्छन् ?
October 29, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरू कुन देशका नागरिक हुन्छन् ?
प्लेनमा जन्मिएका बच्चाहरू कुन देशका नागरिक हुन्छन् ? काठमाडाैँ । हामी धेरैले प्लेनमा नै बच्चाको जन्म भएको सुनेका छैनाैँ होला, तर कतिपय भने यस्ता घटनाको प्रत्यक्षदर्शी समेत भएका पनि हुन सक्छाैँ । यदी प्लेनमा बच्चा जन्मिएमा उक्त बच्चा कुन देशको नागरिक हुन्छन् त ? यो कुरा हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । विश्वका धेरै देशहरूमा […]
October 29, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on ८ घण्टा काम गर्ने श्रीमान १६ घण्टा बढी काम गर्ने श्रीमतीलाई आफुले पाल्नुपर्ने चिन्ता लिन्छन… !
८ घण्टा काम गर्ने श्रीमान १६ घण्टा बढी काम गर्ने श्रीमतीलाई आफुले पाल्नुपर्ने चिन्ता लिन्छन… ! श्रीमती पाल्ने कि श्रीमान् ??…. सुदुर समाज / सरिता दाहाल – रिपोर्टिङको सिलसिलामा छोटो यात्रामा थियाैं । साथमा थिए एक पुरुष पत्रकार अनि पाँच जना अधिकारकर्मी । गाडीमा थियौं । बिहेको सिजन बाटोमा एक विहेको जन्ती भेटिए । त्यसपछि […]